About Us - Green Cuntada Pack Co., Ltd.
koob derbiga Double
Udhaqaajiyaa Wall Cup
bacda kibis caaga
Label Cake warqad yar
Coffee Cup daboolka
Coffee Cup darafta
Greenfoodpack Co. waa soo saaraha xirfadle Chinese ee baakooyinka alaabtaa oo loogu talogalay dubayaasha, hotel, dukaamada nacnac iyo dukaamo qaas ahaan la mid ah. Waxaan ku faanaa in bixiya noocyo kala duwan oo soo saarka wehel aan kaliya u qurux badan, laakiin fududahay in la isticmaalo.
In la dhiso aad brand, adeegga ODM kartoo waxaa laga heli karaa sida suuqa hadafkaagu yahay, la MOQ u dabacsan of si tijaabo on waxyaabaha badan. dubayaasha Haddaba Greenfoodpack ayaa ka caawiyay, hotel iyo ganacsiga kale ee adeegga cuntada si ay u gaaraan xadad sare. Maxaa yeelay, dhammaan xilli, oo dhan maalmaha fasaxa, waqtiga oo dhan. Tayada, design iyo adeeg gelin Greenfoodpack hor duurka.
Sida shirkadda macaamiisha u janjeedha ah, Greenfoodpack dadaalay in uu yahay hoggamiye in industry baakada. Waxaan u huray in aad guul by bixiya xalka ugu wanaagsan iyo bixinta Baakadaha ugu sareeya tayo leh oo ay la socdaan adeegga macaamiisha u go'ay.
Cinwaankaaga: Donghuan Industrial Park, Donghuan Road, Panyu Degmada Guangzhou, Shiinaha
Dambiisha Daabacidda Carrier , Bacda wax lagu rito Rooti , Cake Pop Khaanadaha, Paper Cup, Hot Cold Cups, Kraft Paper Straws,